"Beesha Caalamku waa in ay joojiso Deeqaha ay siiso shirka Nabada Soomaalida ee kenya dibna u Eegto Gudiga Farsamada IGAD Sida ay Wax u Wadaan."
sidaas waxaa lagu sheegay shir jaraa'id oo Nairobi lagu qabtay August 9
Shir maanta (Augu 9) lagu qabtay magaalda nairobi oo ay ka soo qayba galeen ururada bulshada rayidka ah,ugaasyo, qaar ka mid ah soomaalida qurbaha oo u yimid shirka,aqoonyahano ergada shirka qaarkood ,wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlada kmg ah ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay dib u eegid ku samayso deeqaha ay ku bixiso shirka nabdaynta Soomaalida ee ka socda Kenya.
Qaybahan oo iskood isku abaabulay waxay sheegeen in shirkan aan loo dhamayn isla markaana uu yahay mid sababaya colaad hor leh oo soomaalida dhexmarta mar hadiii aan lagu wadin wadadii saxda ahayd.Axdigana uu yahy mid aanay Soomalidu shaqo ku lahayn,iygoo intaasi ku daray in la joojiyo dooda Axiga ee haatan ka socota shirka.
Ugaas ciise ugaas cabdulle oo ka hadlayay shirkaasi ayaa sheegay in ugaasyada kaalintoodii aanay helin isla markaana uu shirku yahay mid hal dhinac u janjeera sida uu sheegay ugaasku,waxaa kale oo halkaasi ka hadlay ururada bulshada rayidka iyagoo sheegay in talooyinkoodi layska indha tiray shirkana ay ka maqan yihiin qaybo muhim ah.
Sidoo kale waxaa maanta warsaxaafadeed kasoo saaray magaalada Nairobi muuse suudi yalaxow isagoo ku cadeeyay in uu ka baxay shirka.kuna tilmaamay mid aan guul laga gaaraynin,soomaaliduna u dhamayn,muuse ayaa intaasi ku daray in gudiga farsamadu ay dhinac u janjeeraaan Axdigana uu yahay mid dhaawacaya midnimada ummada soomaaliyeed.isagoo ugu baaqay beesha caalamka in ay joojiyaan deeqaha maadaama aanay ku bixin ayuu yiri muuse meelihii loogu talagalay.
Dhinaca kale warsaxaafdeed laga soo saaray safaarada mareykanka ee Nairobi ayaa sheegaya in aanay aqoonsi siin doonin wax walba oo shirka ka soo baxa ilaa ay u dhamaanayaan dhinacayada uu dagaalku ka dhexeeyo.
Muran badan ayaa ka taagan dooda Axdiga iyadoo laysku haysto Qododbka 19aad maqradiisa 2aad oo ku xusan in ismamul Goboledyada iyo Dowlada gobaleedyada la xoojiyo taasi oo ay ku gacan sayreen kooxda G8ka,ilaa haddana aanay usoo xaadirin shirka.
Dad badan ayaa is weydiinaya halka uu ku dambayn doono aayaha dambe ee ummada soomaaliyeed iyadoo cadawyo badana uu dalku baylah u yahay,waa wax laga xumaado in kuwa ergada ah qaar ka mid ah sheegeen in aysan isku diin iyo dhaqanba ahayn soomaalidu iyadoo ay ka tahay federal jecayl.beesha caalamkana uga raadsanaya kaalmo.
Anab Mohamoud Abdulle canabmumtaz@hotmail.com